Semalt: Izay rehetra tokony ho fantatrao momba ny PHP Web Scraper amin'ny endrika scrapper HTML
PHP Web Scraper dia manampy amin'ny famerenana haingana ny HTML amin'ny pejy web ary mampiseho azy amin'ny tranonkala samihafa. Ny mampiavaka ity fampiharana ity dia ny fampidirana ny angona avy amin'ny toerana voatondro ary mampiseho izany amin'ny manaraka indray miverimberina. Noho izany, rehefa mivoatra ny votoatin'ny tranonkalan'ny loharanom-baovao, ny programa dia hanaparitaka ny votoaty ary hamela azy ao amin'ny tranonkalan'ny vohitra, ka izany dia mitazona ihany koa ny tranonkala.
Ohatra, raha mila mijery ny lalao baolina fandaka farany avy amin'ny tranonkala malaza foana ianao, dia midira ao amin'ny URL an'ny tranonkala loharanon-drakitra miaraka amin'ny selector CSS ho an'ny tranonkala PHP. Hanokatra fehezan-dalàna izany. Ampidiro ao amin'ny loharanon-tsoratry ny pejinao ny code, ary izany dia. Izay hitanao eo amin'ny pejinao dia ny isa farany indrindra amin'ny pejy loharano.
Ity fitaovana ity dia tsara ho an'ny famoahana ny votoatin'ny fampitahana matetika toy ny lozisialy, tahirim-bola, vidin'ny, ary vaovao mba hitenenana vitsivitsy. Ity haingon-doko HTML ity dia iray amin'ireo tsara indrindra satria mora ampiasaina, manolotra asa avo lenta, miara miasa amin'ny navigateur rehetra izy, ary ny tena zava-dehibe, izany dia miaraka amin'ny fanohanana kalitao.
Ny tsy fahampiana
Mampalahelo fa mety tsy afaka mamoaka angona avy amin'ny toerana sasany ny fampiharana. Noho izany dia tsara ny manandrana azy alohan'ny hividiananao azy. Amin'izao fotoana izao dia tsy afaka manaisotra lahatsary avy amin'ny Vimeo, YouTube, ary tranonkala fifampizaràna lahatsary ny scraper.
Tsy afaka manangona ny votoatin'ny flash-drakitra izy na dia afaka manangona ireo rakitra aza. Tsy afaka maka votoatiny fotsiny izy ireo raha tsy misy ireo mpampiasa voasoratra ao amin'ny tranonkala sasany toy ny pejin'ny inbox sy ny pejin'ny profil
Valin'ny fanontaniana matetika
Azonao atao ny mamono votoaty amin'ny pejy maromaro ary asehoy izany amin'ny pejy tokana miaraka amin'ity fitaovana ity. Mila mamorona pejin-drindrina ho an'ny loham-pejy tsirairay ianao ary Ampidiro ao amin'ny loharanon-tsofin'ny pejy izay tianao ampisehoana azy ireo.
Ankoatra izany , azo atao ny manaisotra singa maromaro avy amin'ny pejy loharano.
Tsy azo atao ny mamaky ny tranonkala miaraka amin'ity fitaovana ity satria tsy ny tanjon'izany.
Na dia tsy manohana WordPress aza ity fampiharana ity dia misy fitaovana manokana ho an'ny WordPress.
Azonao atao ny mampiasa ny CSS mba hanamboarana HTML
Azonao atao ny mahazo ny HTML farany vao tafiditra amin'ny famelomana ny tranonkala. Amin'ny fampiasana ny baolina kitra ataon'ny baolina indray, raha ny isa farany azonao dia 0 - 0 ary ny isa dia miova ho 1-0, tsy ho hitanao ao amin'ny tranonkalanao mandra-pamoakanao azy.
HTML naseho ao amin'ny tranonkalanao amin'ny endrika HTML raha tsy misy CSS.
Farafahariny, manolo-kevitra ny hampiasa io fitaovana ara-dalàna io. Mitadiava hatrany ny fanomezan-dàlana avy amin'ireo tompon'ny pejy web raha tsy efa azonao ny votoatin'ny HTML. Amin'ny tenanao manokana ianao dia mampiasa ny fitaovana Source .